फ्रुटी उद्योगमा छापा मार्दा सहायक प्रजिअलाई कारबाही ! सञ्चालक दुगड फरार - Deshko News Deshko News फ्रुटी उद्योगमा छापा मार्दा सहायक प्रजिअलाई कारबाही ! सञ्चालक दुगड फरार - Deshko News
फ्रुटी उद्योगमा छापा मार्दा सहायक प्रजिअलाई कारबाही ! सञ्चालक दुगड फरार
म्याद नाघेको म्यांगो पल्प (आँपको गुदी) प्रयोग गरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने फ्रुटी उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक प्रजिअ) लाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
दुई वर्षअघि पनि सोही उद्योगमा सरकारले अनुगमन गरेको थियो। स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा फ्रुटीको पोका फुलेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। त्यो बेला पनि उद्योग बन्द गरी खाद्य ऐनअनुसार दुई हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै उक्त उद्योगले म्याद नाघेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको घटना बाहिर आएको हो।